ဘရိတ်ဆီကို ပုံမှန်လဲပေးသင့်သလား? | CarsDB
ဘရိတ်ဆီ လဲသင့်မလဲသင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအလိုက် ကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်.။ Marcedes-Benz ကားတွေရဲ့ အညွန်းမှာ ဘရိတ်ဆီကို (၂) နှစ်တစ်ကြိမ် (သို့) မိုင် (၂၀၀၀၀) မောင်းနှင်ပြီးတိုင်း လဲလှယ်ပေးသင့်တယ်လို့ ဆိုထားပြီး Volkswagen ကားကုမ္ပဏီကလဲ သူ့ရဲ့ကားမော်ဒယ်အများစုကို (၂) နှစ်တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ပေးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.။ Subaru ကတော့ မိုင် (၃၀၀၀၀) မောင်းနှင်ပြီးတိုင်း လဲလှယ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.။
သို့ပေမယ့် Chevrolet ကုမ္ပဏီရဲ့ Schedule အရဆိုရင်တော့ (၁၀) နှစ် (သို့) မိုင် (၁၅၀၀၀၀) မောင်းနှင်ပြီးတိုင်း လဲလှယ်သင့်တယ်လို့ ဆိုထားပြီး Ford နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အစီးများတဲ့ Toyota ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ဘရိတ်ဆီနဲ့ပတ်သက်လို့ လဲလှယ်ဖို့ ပြောဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး.။
MyanmarCarsDB မှ Toyota ကားများကိုကြည့်ရန်
ဒါဆိုရင် ဘရိတ်ဆီမလဲရင် ဘာများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?
ဘရိတ်ဆီတွေဟာ အလုံပိတ်ထားတဲ့နေရာမှာ Seal လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် ရေငွေ့စိမ့်ဝင်မှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသေးတယ်.။ ရေငွေ့တွေဟာ ဘရိတ်စနစ်ကို တိုက်စားပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သလို ဘရိတ်ဆီရဲ့ ရေဆူအမှတ်ကို လျော့ကျစေပြီး အကြိမ်ရေများများ ဘရိတ်အုပ်တဲ့အခါ ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့စနစ်ကိုလဲ နှေးကွေးစေပြီး လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်.။
ဒါဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာရင် လဲလှယ်ပေးရမလဲ?
အချိန် (၂)နှစ်တစ်ကြိမ် (သို့) (၃) နှစ်တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ပေးခြင်းဟာ ခဏခဏလဲပေးသလိုဖြစ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် သင့်စိတ်ကိုကျေနပ်စေမယ်ဆိုရင် လဲပေးသင့်ပါတယ်.။ ဒါမှမဟုတ် သင်စီးတဲ့ကားကို ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Schedule မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ အခြားဘရိတ်စနစ်တွေကို စစ်ဆေးရင်း (၄-၅) နှစ်တစ်ကြိမ် လဲလှယ်ပေးခြင်းဟာ အဆင်ပြေပါတယ်.။ လဲလှယ်တဲ့အခါမှာလဲ ကားကုမ္ပဏီက ထောက်ခံပေးတဲ့ ဘရိတ်ဆီအမျိုးအစားကို လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်.။ တစ်ချို့ကားတွေဟာ DOT3 ထည့်သွင်းပေးဖို့ ထောက်ခံထားပြီး တစ်ချို့ကတော့ DOT5 ကို ထောက်ခံပေးထားပါတယ်.။
ဘရိတျဆီ လဲသငျ့မလဲသငျ့နဲ့ပတျသကျပွီး ကားထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီအလိုကျ ကှဲပွားမှုတှရှေိပါတယျ.။ Marcedes-Benz ကားတှရေဲ့ အညှနျးမှာ ဘရိတျဆီကို (၂) နှဈတဈကွိမျ (သို့) မိုငျ (၂ဝဝဝဝ) မောငျးနှငျပွီးတိုငျး လဲလှယျပေးသငျ့တယျလို့ ဆိုထားပွီး Volkswagen ကားကုမ်ပဏီကလဲ သူ့ရဲ့ကားမျောဒယျအမြားစုကို (၂) နှဈတဈကွိမျလဲလှယျပေးသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ.။ Subaru ကတော့ မိုငျ (၃ဝဝဝဝ) မောငျးနှငျပွီးတိုငျး လဲလှယျသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ.။
သို့ပမေယျ့ Chevrolet ကုမ်ပဏီရဲ့ Schedule အရဆိုရငျတော့ (၁ဝ) နှဈ (သို့) မိုငျ (၁၅ဝဝဝဝ) မောငျးနှငျပွီးတိုငျး လဲလှယျသငျ့တယျလို့ ဆိုထားပွီး Ford နဲ့ မွနျမာပွညျမှာ အစီးမြားတဲ့ Toyota ကုမ်ပဏီတှကေတော့ ဘရိတျဆီနဲ့ပတျသကျလို့ လဲလှယျဖို့ ပွောဆိုထားခွငျးမရှိပါဘူး.။
MyanmarCarsDB မှ Toyota ကားမြားကိုကွညျ့ရနျ
ဒါဆိုရငျ ဘရိတျဆီမလဲရငျ ဘာမြားဖွဈနိုငျပါသလဲ?
ဘရိတျဆီတှဟော အလုံပိတျထားတဲ့နရောမှာ Seal လုပျထားတယျဆိုပမေယျ့ ရငှေစေိ့မျ့ဝငျမှု ဖွဈနိုငျခရြှေိပါသေးတယျ.။ ရငှေတှေ့ဟော ဘရိတျစနဈကို တိုကျစားပကျြစီးခွငျး ဖွဈနိုငျသလို ဘရိတျဆီရဲ့ ရဆေူအမှတျကို လြော့ကစြပွေီး အကွိမျရမြေားမြား ဘရိတျအုပျတဲ့အခါ ဘရိတျဖမျးတဲ့စနဈကိုလဲ နှေးကှေးစပွေီး လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ.။
ဒါဆိုရငျ အခြိနျဘယျလောကျကွာရငျ လဲလှယျပေးရမလဲ?
အခြိနျ (၂)နှဈတဈကွိမျ (သို့) (၃) နှဈတဈကွိမျလဲလှယျပေးခွငျးဟာ ခဏခဏလဲပေးသလိုဖွဈနတေယျ ဆိုပမေယျ့ သငျ့စိတျကိုကနြေပျစမေယျဆိုရငျ လဲပေးသငျ့ပါတယျ.။ ဒါမှမဟုတျ သငျစီးတဲ့ကားကို ထုတျလုပျတဲ့ကုမ်ပဏီက ထုတျပွနျထားတဲ့ Schedule မရှိဘူးဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ အခွားဘရိတျစနဈတှကေို စဈဆေးရငျး (၄-၅) နှဈတဈကွိမျ လဲလှယျပေးခွငျးဟာ အဆငျပွပေါတယျ.။ လဲလှယျတဲ့အခါမှာလဲ ကားကုမ်ပဏီက ထောကျခံပေးတဲ့ ဘရိတျဆီအမြိုးအစားကို လဲလှယျပေးသငျ့ပါတယျ.။ တဈခြို့ကားတှဟော DOT3 ထညျ့သှငျးပေးဖို့ ထောကျခံထားပွီး တဈခြို့ကတော့ DOT5 ကို ထောကျခံပေးထားပါတယျ.။
Posted at: 09-02-2015 08:11 AM